Xulka kubada cagta Puntland oo todobaadkaan lagu dhawaaqayo. | puntlandi.com
Tuesday, September 5th, 2017 | Posted by Pi
Xulka kubada cagta Puntland oo todobaadkaan lagu dhawaaqayo.
Xiriirka kubada cagta dowladda Puntland ayaa todobaadkaan la filayaa inay ku dhawaaqaan xulka Puntland u matalaya tartanka kubbada cagta dowlad goboleedyada Soomaaliya, kaasoo bishaan ka furmaya magaalada Kismaayo.
Puntland ayaa sanadkaan doonaysa inay difaacato horyaalka kubbada cagta Soomaaliya, waxaana xidhiidhku aad ugu mashquul yahay xulashada ciyaartoyda sanadkaan dowladda Puntland u matalaya horyaalka Soomaaliya, ciyaartoydaas oo isugu jiridoono kuwii sanadkii hore tartanka ku guulaystay iyo ciyaartoy cusub oo leh tayo wanaagsan.
Ciyaartoyda ayaa marka lagu dhawaaqo liiskooda lagusoo xarayndoonaa magaalada Garowe ee caasimadda Puntland, iyagoo qaadandoono tababaro diyaar garow ah iyo isfaham dhexdooda ah.
Agaasimaha guud ee dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland, Axmed Tigaana ayaa Puntlandi u sheegay inay qaban qaabadu meel wanaagsan marayso, isagoo sheegay xidhiidka Puntland in laga sugayo inay soo saaraan ciyaartoy sidii sanadkii hore guul soo hoyin kara.
Guddoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Faraweyne ayaa ku baaqay in loo diyaar garoobo sidii garab iyo gaashaan loogu noqon lahaa xulka kubbada cagta Puntland, isagoo cadeeyay maamulka gobolka Nugaal inuu kaalin ka qaadanayo soo dhowaynta ciyaartoyda iy xarayntooda.
Xoghayaha xidhiidka kubbada cagta Puntland, Cabdulqaadir Cali Daahir (Juula) ayaa inay ku jiraan qaban qaabadii ugu dambeysay ee xulitaanka ciyaartoyda Puntland, isagoo sheegay inay soo saaridoonaan xul u qalma inuu matalo Puntland.
Bishi Julay 26-keedii ayay ahayd markii xulka kubada cagta Puntland uu ku guulaystay tartankii dowlad goboleedyada Soomaaliya ee lagu qabtay magaalada Kismaayo.